Semalt Islamabad Nyanzvi Inotsanangura Kutsvaga Kwinjini Kushanda
Inofanirwa injini yekutsvaga s inoita mabasa akasiyana-siyana, zvakadai sewebsite dzinokambaira, kuvaka chirongwa, nekupa vashandisi urongwa hwemawebsite akakurumbira maererano nekutsvaga kwavo uye mazwi makuru. Chimwe nechimwe chinomira ndicho chirongwa chakasiyana (pdf, web page, jpg, png, kana zvimwe), uye injini dzekutsvaga dzinovhura webhusaiti yose uchishandisa gwaro iri. Vanoisa zvizere uye vanoona kukosha kwe backlinks yemamwe mawebsite. Izvo zviviri zvinonyanya kushanda kweinjini dzekutsvaga ndezvi:
Sohail Sadiq, nyanzvi yepamusoro kubva ku Semalt Digital Services, inowirirana pano mazano anobatsira panyaya iyi.
1. Kuenzanisira uye kutamba kwemasayiti: injini dzekutsvaga zuva nezuva dzinokwidza mamiriyoni emagwaro matsamba, mapeji, nhau dzemashoko, mavhidhiyo, mafaira, uye nhau - vorratsschrank liste.
2. Kupa mhinduro dzakarurama: injini dzekutsvaga dzinopa mhinduro kumibvunzo yomudhiriri mumhando yematombo uye mapeji akakodzera avanowana uye anotsigira kuwirirana.
Mitsva yekutsvaga inoona sei kufanirwa nekukosha?
KuGoogle, Bing, Yahoo nedzimwe injini dzekutsvaga, kukosha kunoreva kuwana chokwadi chemashoko nemitsara. Pane dzimwe nguva apo injini dzekutsvaga dzakatipa isu zvishoma. Uye zvino injini dzakangwara uye dzine ruzivo dzakagadzirira nzira dzekufananidza mhinduro kune mibvunzo yevashandi zvakajeka. Mazana kusvika kuzviuru zvezvinhu zvino anokonzera kukosha, uye injini dzinotsvaga dzinofunga kuti mawebsite akakurumbira ane data yakakosha uye yakarurama. Iko kufungidzira kwakaratidza kuva kubudirira maererano nekugutsikana kwevashandi neGoogle, Bing, uye Yahoo. Injini dzinotsvaga dzinoshandisa mashandisirwo akajeka kuti aenzane nemawebsite akasiyana, uye izvi zvigadziri zvinoumba mazana kuzviuru zvezvipembenene..Mundima yekutengeserana, nyanzvi dzinotarisa maitiro ekugadzirisa senyaya.
Tinoita sei kubudirira kubudirira?
Shanduro dzakanakisisa dzezvinjini dzinoita sedzisingaitiki, asi injini dzinopa ruzivo rudiki pamusoro pekuzadzisa zvidimbu zvinoda kana garner yemigwagwa yepamusoro nguva dzose. Kazhinji kazhinji, injini dzinotsvaga dzinotipa ruzivo pamusoro peSEO uye kuti tingatsiridza sei nzvimbo yako.
Google nedzimwe injini dzekutsvaga dzinokurudzira zvinotevera kuti zvive nani:
1. Ita mapeji acho zvikurukuru kune vashanyi vako, kwete yevanjini. Iwe haufaniri kunyengedza vashandisi uye usadzivisa kupa zvinyorwa zvakakunakira zviri nani kutsvaga injini .
2. Shandisa webhusaiti yako nehuwandu hwehutungamiri uye hutano hwemashoko. Mavhesi ose anofanira kuverengwa uye anogona kuwanika nokuda kwechidimbu chetest static text link.
3. Iwe unofanirwa kuumba, unoziva uye unobatsira webhusaiti, uye nyora zvinyorwa zvinonyatsotsanangura zvigadzirwa zvako uye mazano.
4. Iwe unofanirwa kushandisa mazwi akakodzera nemitsara yekukudziridza vanhu-vane hanya uye vanotsanangura URL. Zvakakosha kupa shanduro imwechete ye URL kuitira kuti vashandisi vasatungamirirwa kumapepuri makumi matatu nemakumi maviri nemakumi maviri nemakumi maviri nemakumi maviri
Kuwedzera kune aya mazano uye mazano, vatengesi vekutsvaga vakawana nzira dzokuti vangabudisa sei ruzivo kubva pamapeji avo. Iye zvino, vatengesi uye SEOs vanoshandisa mazano uye data kuti vabatsire mawebsite uye bhaibheri kuti vawane hukama hwakanaka mu mitsva yekutsvaga injini . Zvinotoshamisa kuti injini dzinotsvaga dzinotsigira miitiro yakasiyana uye dzinopa mazano anobatsira kuvashandi vavo. Kunyange vamiririri vekutsvaga vanobatsira webmasters nemablogiki kuburikidza nekubatanidzwa mumashoko ekubhuku, maforamu, uye nhaurirano dzeboka.